नेदरल्याण्डसमा आयोजित पर्यटन मेलामा नेपालका तर्फबाट पनि सहभागिता जनाइएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट सहभागिता जनाइएको उक्त मेलामा नेपाल चिनाउने सामाग्रीहरु राखिएको थियो । मेलाको उद्घाटन समारोहमा नेदरल्याण्डस्, बेल्जियम
सेताम्मे कालिन्चोक, जाने होइन त हिउ खेल्न ? (फोटो फिचर )
नेपालमा देशैभरि चिसो बढ्नुका साथै हिमाली भेगमा हिमपात भएको छ । चिसो बढेसँगै दोलखाको कालिन्चोक र आसपासका क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । कुरी बजार हिउँले छपक्कै ढाकेको छ । हेर्नुहोस्
विदेशमा नेपाललाई चिनाउन नेपालीहरुले विभिन्न तरिकाहरु अपनाउने गरेका छन् । स्टारबक्समा कफी अर्डर गर्दा नाम नेपाल बताएर, गाडीको नम्बरप्लेट नेपाल राखेर वा ट्याक्सी चलाउँदा नेपालको बारेमा बताएर वा फ्लायर दिएर
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै पूरा हुने भएको छ । निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको र तोकेको समयभन्दा अगाडि नै पूरा हुने जनाइएको छ
– अस्मिता खड्का अमेरिकाको राम्रो यूनिभरसिटिमा पढ्ने चाहना धेरै विद्यार्थीहरूको हुन्छ । त्यसको लागि कोही कोशिश गर्दछन् त ! कोही आफ्नो चाहना मनमै मारिदिन्छन् । तर,सुदिप आचार्यको विदेश पढ्न जाने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले बैशाख २५ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । तत्कालीन परिस्थितिमा अस्वभाविक लाग्ने विद्युत् उत्पादनको
पाल्पाको रानीमहल आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दुबैका लागि ऐतिहासिक महत्व बोकेको पर्यटकीय स्थल हो । नेपाल आएको बखत पाल्पाको रानीमहल पुग्ने विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ । केहीसमय
हिन्दु र बौद्धधर्मालम्बीहरुको पवित्र स्थलका रुपमा परिचित मुस्ताङको मुक्तिनाथमा हिन्दुमन्दिरको नजिकै नेपालको सबैभन्दा ठूलो ढुंगाको बुद्धमूर्तिको धार्मिक अनावरण गरिएको छ । अमेरिका निवासी व्यवसायी सोनाम लामाको एकल पहल र झण्डै